Maitiro ekumisikidza Unicode Emoticons pane yako iPhone uye iPad | IPhone nhau
Chechitatu-bato makadhibhokisi anozadza App Store, asi chokwadi ndechekuti hapana kana rimwe rawo rinoshanda sezvinoitwa neazvino iOS, kunyangwe chiri chokwadi kuti vanounza nhau kuti Apple yenguva dzose yeIOS haina, asi haigumi kuwana kugadzikana uye kumhanya kana default keyboard. Nekudaro, kwenguva yakareba pakave nekhibhodi inofungidzirwa nevazhinji kuti ivanzwe muIOS. Zvino isu tajaira kune izvo zviso zveyero uye akawanda madhirowa eEmojis, zvisinei, pakanga paine nguva apo patakaita hunyengeri nemakiyi kuti titeedzere zvakajairwa zviso. Isu tinotaura nezve Ascii manzwiro. Tichakuratidza maitiro ekumisikidza Unicode Emoticons pane yako iPhone ne iPad kuburikidza neayo yakavharika keyboard mune yemuno maseteni chikamu
Kunyangwe hachisi chakavanzika, vashoma kana chero hapana anoziva kuti isu tinowana khibhodi nyowani izere nemasikirwo, iwo akatosiyana neaya atinowanzoshandisa muWhatsApp uye kuti mune iyo iOS (kwete kudaro muAroid) ivo vari zvakanyatsobatanidzwa muhurongwa. Tiri kutaura nezve mamonikoni muUunicode, ndiko kuti, akagadzirwa nemubatanidzwa wemavara akasimbiswa mumakhibhodi akajairwa, ndokuti, mavara akagadzirirwa kunyora zvinyorwa, izvo kana zvikaiswa munzira kwayo zvinomutsa mamonikisi uye ayo akawedzera kunge furo muJapan, kwairi zvakajairika kuishandisa mune ese marudzi ezvinyorwa zvakanyorwa.
Kutanga tichaenda kune yakajairwa iOS zvigadziriso application. Kana tangopinda mukati, isu tinofanirwa kuenda kune iyo general chikamu, pane iyo keyboard chikamu, pakati pezvimwe zvinhu. Dzvanya pa «kiibhodhi»Zvekuti iwo akasiyana maitiro eiyo iOS keyboards anovhurirwa isu.
Kamwe mukati, tinodzvanya pa «Teclados«, Iyo iri zvakare yekutanga sarudzo yezvose, kubaya pa« kuwedzera new keyboard»Ndeapi mune ino kesi iri yekupedzisira yemabasa. Tichafanirwa kufamba pakati pemakirabhu, sezvatakambotaura, iri keyboard yakafararira muJapan, saka, zvingaite sei neimwe nzira, isu tichafamba tichitsvedza nemhamba isingaverengeki yemakirabhu kusvika iyo «japanese".
Panzvimbo pokusarudza chiJapanese zvakananga, tichaona kuti tebhu nyowani inovhura, zvakasiyana nemitauro yekutanga. Isu tinowana pano mavhezheni maviri echiJapanese, maKana nemaRomani, tinofanirwa kusarudza iyo Romaji saka kuti ino yakavanzika keyboard iratidzwe kwatiri patinoshandisa iyo keyboard. Nekudaro, isu tinosarudza iyo keyboard uye toiwedzera kune yedu yakajairwa keyboard rondedzero, tinogona kubvisa iyo Emoji keyboard kana tichida kuchinja nekamwe chete kubva kuSpanish kuenda ku "Romaji" uye kuti zviite nyore.
Iye zvino isu tichangoenda kune chero chinyorwa bhokisi uye tinya pabhora repasi rinoonekwa pazasi kuruboshwe uye ndiyo iyo inotibvumidza kuti tichinjane pakati pemakhibhodi akasiyana eiyo iOS system. Tichaona kuti vanonyanya kutaurwa vechiJapane mune iyi modhi vakafanana neChirungu. Zvisinei, patinodzvanya pa «123» inova bhatani ratinoshandisa kuratidza mavara akasarudzika, tinowana roja nyowani, mucherechedzo unoshamisa pazasi kurudyi padyo ne «Dele» kiyi uye utaure zvinotevera: ^ _ ^.
Kana isu tikangodzvanya iyi nyemwerero kodhi, akateedzana e Unicode Emoticons anozoratidzwa pamusoro pekhibhodi, kana isu tikabaya pamusoro kumusoro museve kurudyi kwese, huwandu isingaverengeke yemamwe Unicode Emoticons inoratidzwa, uko Isu hazvingakwanise chete kuisa izvo isu zvatinoda, asi isu tichawanawo nyowani nyowani dzaungangodaro usina kuziva nezvazvo. Isu isu takaberekwa gore ra2000 risati rasvika tinoziva aya mamoyoni nemoyo, sezvo tichiashandisa nguva zhinji mumasisitimu ekare ehurukuro. Nekudaro, pamwe nekufambiswa kweEmoji, aya marudzi emakhibhodi akave akaiswa kumashure kune zvakapfuura uye atove anenge ekufananidzira, kuvapo kwavo kwakadzama kunze kweJapan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekumisikidza Unicode Emoticons pane yako iPhone uye iPad
Mojo, iyo Cydia-senge inosimudza michina isina Jailbreak